နိုင်ငံအနှံ့အပြား မိုးကြီးနေစဉ်တွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတခု ဖြစ်လာနိုင်ဟု ဦးထွန်းလွင်ပြော - Myitter
နိုင်ငံအနှံ့အပြား မိုးကြီးနေစဉ်တွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတခု ဖြစ်လာနိုင်ဟု ဦးထွန်းလွင်ပြော
September 2, 2019 Myitter ပြည်တွင်းသတင်း 0
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ခုနစ်ခု၌ မိုးကြီးနေ၍ ရေဘေးသတိပေးထားစဉ် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ယနေ့ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်၊ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သည်။ ယခုရက်ပိုင်း နေပြည်တော်၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ရခိုင်၊ ကရင်၊ မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် မိုးကြီးနေပြီး ဆက်လက်မိုးကောင်းနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။ ယင်းအချိန်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်လာနိုင်ခြေ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ် သည်။
“လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်လာနုိင်လို့ မိုးကဆက်ကောင်း နိုင်တယ်။ ဒီကာလက တတိယရေကြီးကာလ၊ သတိထားနေရမယ်’’ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကပြော ကြားသည်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံ လေအားကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းနေပြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် နောက်၂၄ နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ယမန်နေ့ (စက်တင်ဘာ ၁ ရက်) မွန်းလွဲ ၃ နာရီက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ 7Day Daily (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)
ကျန်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ။ ၁-၉-၂၀၁၉၊ ည(၉း၀၀)နာရီ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီး၊ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဆိုပါလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် အ ခြေ အ နေ။ (၁ -၉-၂၀၁၉)ရက် နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီအချိန်KALPANA_1 ဂြိုဟ်တုမှတိုင်းတာပေးချက်အရ၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော် တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့် မှ တ်ိမ်ထူထပ် နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဒေသ တွေမှာ တိမ် အသင့်အတင့် မှ တ်ိမ်ထူထပ် နေပြီး၊ကျန်ဒေသ တွေမှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ် ထွန်း နေပါတယ်။
အ နောက်တောင် မုတ်သုံလေ အ ခြေ အ နေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင် ပိုင်း တို့မှာ မုတ်သုံလေ အားအလွန်ကောင်း နေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တွင် မုတ်သုံ‌လေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အ ခြေ အ နေ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္ထမ ကွေ- မွန်- တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်း လွန်ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ လှိုင်းကြီးနိုင်ပြီး၊ကျန်မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ လှိုင်းအသင့်အတင့် ရှိပါမယ်။ လှိုင်းအမြင့် မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္ထမ ကွေ့၊ မွန်- တနင်္သာရီ ကမ်းရိုး တန်း နှင့် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ (၈) ပေ မှ (၁၅) ပေခန့်၊ ကျန်မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်း လွန်ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ (၃) ပေ မှ (၇) ပေ ခန့်ထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။
နေ့အပူချိန်များ အ ခြေ အ နေ။ ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တို့မှာ 23 °C မှ 28°C ခန့်၊ကျန်ဒေသတွေမှာ 29°C မှ 34°C ခန့်အထိ ရှိနိုင် ပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အညွှန်းကိန်းများ အ ခြေ အ နေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်ဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်ဒေသကြီးး တို့မှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်း မြင့်မား အဆင့် တွင်ရှိနိုင်ပြီး၊ကျန်ဒေသ တွေမှာ အလွန်မြင့်မား အဆင့် တွင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့အလားအလာ။ တပြည်လုံးတွင် မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မ ကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် အလားအလာ ပိုများနိုင်ပါတယ်။
မိုးရွာသွန်းမှု အ ခြေ အ နေခန့်မှန်းချက်။ တစ်ပြည်လုံး မှာ နေရာစိပ်စိပ် မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်း ရွာပါမယ်။ နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။
မွန်ပြည်နယ် နှင့် ကရင်ပြည်နယ် တို့မှာ မိုးပို လာနိုင်ပါတယ်။
သိရဲ့သားနဲ့ အမှန်တရားပေါ်မလာတာဘာကြောင့်လဲ? ကမ္ဘာကြီးကဝိုင်းဝန်းမကူညီနိုင်ကြတော့ဘူးလား? အမှန်တရားဆိုတာကြီးဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ?
ထီလက်မှတ်များကို ဈေးတင်ရောင်းချနေသူများအား အရေးယူတော့မည်